यी संकेतबाट थाहा हुन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी संकेतबाट थाहा हुन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ?
यदि गर्भमा छोरी छ भने गर्भवती महिलामा महिला हार्मोनको मात्रा बढेको हुन्छ । त्यसैले उनी धेरै मुडी हुन्छिन्। त्यस्तै, शरीरक अंगहरुले पनि छोरा वा छोरी के छ भन्ने कुरामा संकेत गरिरहेको हुन्छ ।यदि महिलाको स्तन को टुप्पोको रंग बढी कालो हुँदै गयो भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । यदि ती महिलाको स्तन को रंगमा थोरै मात्र परिवर्तन भएको छ भने, उनको गर्भमा छोरी हुन्छ।
नेपालमा कोरोना: सुटुक्क अमेरिका फर्के कलाकार सरोज खनाल
मोडल खुश्वु ओलीलाई दुई बर्ष जेल